Nalaina Cup Needle Roller-jaza - China Viproce Industrial
Fampidirana: Nalaina kapoaka fanjaitra-roller bearings Rafitry ny fanjaitra DC-roller-jaza (DC karazana) na ny fanaka vy mangatsiaka nanakodia esory marina tsara niforona. Rafitry ny DC-roller fanjaitra bearings Manasongadina habakabaka mamonjy sy fahaizana ambony. Izy ireo amin'ny mety ho fampiharana voafetra ny toerana sy ny trano fonenana tsy ampy mafy mba hanao ny asan'ny raceway. Tsy misy fepetra amin'ny toerana axial rehefa DC fanjaitra-roller-jaza no nanery ho ao an-trano. Amin'ny ankamaroan'ny anaty peratra fampiharana dia tsy ilaina ho an'ny DC-roller fanjaitra ...
Nalaina kapoaka fanjaitra-roller bearings
Rafitry ny fanjaitra DC-roller-jaza (DC karazana) na ny fanaka vy mangatsiaka nanakodia esory marina tsara niforona. Rafitry ny DC-roller fanjaitra bearings Manasongadina habakabaka mamonjy sy fahaizana ambony. Izy ireo amin'ny mety ho fampiharana voafetra ny toerana sy ny trano fonenana tsy ampy mafy mba hanao ny asan'ny raceway. Tsy misy fepetra amin'ny toerana axial rehefa DC fanjaitra-roller-jaza no nanery ho ao an-trano.
Amin'ny ankamaroan'ny fampiharana anaty peratra dia tsy ilaina ho an'ny DC fanjaitra-roller bearings raha tsy lavaka raceway dia sarotra, fitsipika anaty vava vola ho an'ny DC hampitaha amin'ny Open sy DC fanjaitra-roller bearings, Close farany DC fanjaitra-roller bearings tsara noho ny famehezana any ny akaiky farany ny mitondra . Operating mari-pana isan-karazany ho an'ny bearings menaka lubricated dia -20 ℃ mba + 120 ℃.
Rafitra samihafa andianà voatsoaka kapoaka fanjaitra rollers:
Mimetatra andian-dahatsoratra: HK BK HKS F FH Fy MF MFH MFY
Mirefy andian: SCE TK SCH BCH SN CSN BH M B MH
Manaraka: Needle Roller-jaza
Nalaina Cup Needle Bearings
voaisy tombo-kase Nalaina Cup Needle mitondra